07/01/2014 - 08/01/2014 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ရွေးကောက်ပွဲ ပုံစံ လေ့လာရေး ကော်ရှင်ဖွဲ့ပြီ
မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ် ပေါ်ပေါက် လာစေဖို့ လေ့လာ သုံးသပ် မယ့် ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ဖွဲ့စည်း လိုက် ပါတယ်။
ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဦး ဥက္ကဌ အဖြစ် ပါဝင်ပြီး NLD , NDF နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီ တွေ အပါ အဝင် အဖွဲ့ဝင် ၂၄ ယောက် ပါတဲ့ ကော်မရှင်ကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ဖွဲ့စည်း ပေးလိုက် တာပါ။
လွှတ်တော်, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် , ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကော်မရှင် အနေနဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ အစိုးရနဲ့ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပြင် သာမန် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဘယ်သူ့ကို မဆို ဖိတ်ခေါ် ဆွေးနွေး နိုင်တယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကျင့်သုံးတဲ့ စနစ် တခု ဖြစ်တဲ့ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု PR စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွား မှုတွေ ရှိနေ တဲ့ အချိန် မှာပဲ၊ အခုလို ကော်မရှင် တခုကို ဖွဲ့စည်း လိုက်တာပါ။
ကော်မရှင်ရဲ့ သက်တမ်းက စတင် ဖွဲ့စည်းတဲ့ နေ့ကနေ နှစ်လ လို့ သတ်မှတ် ပေမဲ့ လေ့လာ သုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြီးစီးမှု အခြေ အနေကို မူတည်ပြီး အပြီးသတ် အစီရင် ခံစာ တင်သွင်း ပြီးချိန် အထိ သက်တမ်းကို သက်မှတ် နိုင်ပြီး အဖွဲ့ဝင် တွေကို လွှတ်တော် ဥက္ကဌက လိုအပ် သလို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း နိုင်တယ် လို့လည်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌရဲ့ အမိန့် ကြေညာ စာမှာ ပါရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ တွေမှာ လက်ရှိ ကျင့်သုံး နေတဲ့ fptp စနစ် ဆိုတာ ကတော့ မဲ အများ ရတဲ့သူ နိုင်တဲ့ စနစ် ဖြစ်ပြီး၊ အခု အငြင်းပွား နေတဲ့ PR ဆိုတာ ကတော့ ရှုံးတဲ့ သူကလည်း မဲတွေ အလဟဿ မဖြစ် စေတဲ့ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု စနစ်တွေ ထဲက တခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကော်မရှင်ကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ဖွဲ့စည်း ပေးလိုက် တာပါ ဖြစ်ပါတယ်
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ရဲတံခွန် ရာဘာခြံလုံခြုံရေး မွန်ပြည်သစ်ပါတီတပ်ဖြန့်ထား
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ရဲတံခွန်ကျေးရွာတဝိုက် ရာဘာခြံပိုင်ရှင်များ အကူအညီ တောင်းခံသဖြင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လုံခြုံရေးတပ်ဖြန့် စောင့်ရှောက်ထား သည်ဟု သိရသည်။
ဒေသရှိ KNU အဖွဲ့အစည်းနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ တပ်ဖွဲ့များ အဆက်အသွယ်ရယူပြီး ရာဘာခြံများအား လုံခြုံရေး အကူအညီ ပေးအပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် စစ်ကြောင်းမှူး ဗိုလ်ကြီးမျိုးသွေးက လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA သို့ ပြောသည်။
“ကျနော်တို့တပ်ဖွဲဝင်တွေ အခုလိုစောင့်ရှောက်ပေးတာ ဝမ်းသားတယ်လို့ ခြံသမားတွေက ပြောကြတယ်၊ သူတို့တတွေ ကြောက်လန့်နေရတယ်၊ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ် စိတ်မကောင်းကြဘူး” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
KNU/KNLA-PC တပ်ဖွဲဝင်ဗိုလ်မှူစိုးစိုး ဆိုသူနှင့် KNU ဗိုလ်လက်ဝဲ ဆိုသူတို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လ (၁၈)နေ့တွင် ရဲတံခွန်ကျေးရွာအနီးတဝိုက် ရာဘာခြံရှင် (၄၈)ဦးအား ခြံကိစ္စဆွေးနွေးရန် ဆင့်ခေါ်ရာ ခြံသမားများမလာရောက်ကြသဖြင့် ဇူလိုင်လ(၂၂)ရက်နောက်ဆုံးထား၍ ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးအိမ်သို့လာရောက်တွေ့ဆုံရန် အဓိက (၃)နေရာတွင် ဆိုင်းဘုတ်ထောင် ခြိမ်းခြောက်ထားရာမှ ခြံသမားအများစုက ဒေသရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို အကူအညီတောင်းဆိုလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ရဲတံခွန်ကျေးရွာနေ ရွာသားတစ်ဦးက “အဓိက ရှုပ်နေတာ ဗိုလ်လက်ဝဲနဲ့ ကိုသားငယ်ဘဲ၊ သူတို့က ခြံရှင်တွေကို အကြိမ်ကြိမ် ငွေတောင်းနေတော့ ခြံရှင်တွေလဲ ဘယ်ပေးနိုင်တော့မှာလဲ၊ ဒါကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီပါတီကို အကူအညီတောင်းကြတော့တာပဲ” ဟု ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြည်စန်းက ရဲတံခွန်ကျေးရွာတဝိုက် ရာဘာခြံလုပ်ငန်းများ အစေးလှီးချိန်ကာလများအထိ လုံခြုံမှုရှိစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA သို့ပြောသည်။
ရာဘာခြံလုပ်ငန်းရှင် ကိုစိုးအောင်က “နောက်လဆို အစေးလှီးချိန်ရောက်ပြီး ၊ ခြံသမားတွေ အတွက် မွန်ပြည်သစ်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အခုပုံစံမျိုး လုံခြုံရေးလှည့်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်၊ အဲဒါမှ စိတ်ချမ်းးချမ်းသာသာနဲ့ အစေးလှီးလို့ရမယ်” ဟု ပြောသည်။
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU/KNLA-PC ဘားအံဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးစောအောင်ချစ်က ရဲတံခွန်ကျေးရွာရာဘာခြံနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့နာမည်ခံထားသည့်ကိစ္စအား အထက်လူကြီးထံတင်ပြပြီး သဘောထားထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU/KNLA ဗိုလ်မှူးစိုးစိုးနှင့် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဗိုလ်လက်ဝဲ အမည်ဖြင့် “ရဲတံခွန်နယ်မြေအတွင်းရှိခြံရှင်များ ၂၂. ၇. ၂၀၁၄ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး လာရောက်ဆွေးနွေးရန်နှင့် ပျက်ကွက်ပါက နောက်ပိုင်းခြံကိစ္စများ လုံးဝတာဝန်မယူပါ” ဟူ၍ သံဖြူဇရပ်-ရဲတံခွန်-ဘုရားသုံးဆူ မော်တော်ကားလမ်းဘေးတွင် ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားသည်ကို ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေကျပ် သိန်းသောင်းချီ ပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆင်းကတ်တွေကို ကာတာနိုင်ငံ အခြေစိုက် Ooredoo တယ်လီဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုကနေ ငွေ ကျပ် ၁၅၀၀ နဲ့ ရောင်းချပေးနေတာကြောင့် ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ ဒီကနေ့ ပြည်သူ အများအပြား ၀ယ်ယူခဲ့ကြတာပါ။ တရားဝင်ရောင်းချရမယ့် ရက်ဟာ သြဂုတ်လအတွင်း ဖြစ်ပေမဲ့ ဇူလိုင်လ ၃၀ နဲ့ ၃၁ ရက်တွေမှာ ရန်ကုန် မန္တလေး မြို့ကြီးတွေမှာ ကိုယ်စားလှယ် ဆိုင်တွေက စတင်ရောင်းချ ပေးနေတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင်ကပြောပြမှာပါ။
ဇူလိုင်လ ၃၀ နဲ့ ၃၁ ရက်နေ့ တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းဆင်းကတ် ဈေးကွက် တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေလို့ ပြောရမှာပါ။ ငွေကျပ် သိန်း ၃၀ ကစလို့ နောက်ဆုံး ငွေ ၃၀၀၀၀ ပေးမှ မိုဘိုင်းလ် ဆင်းကတ် ၀ယ်နိုင်တာကနေ ငွေကျပ် ၁၅၀၀ နဲ့ မိုဘိုင်းဆင်းကတ်တွေကို
ကာတာ အခြေစိုက် Ooredoo တယ်လီဖုန်း ၀န်ဆောင်မှု က အများပြည်သူအကြား ၀ယ်ယူနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ အကြား လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
Ooredoo ဆင်းကတ်တွေကို တရားဝင်ရောင်းချခွင့် ရထားတဲ့ ရန်ကုန် မန္တလေးက ဆိုင်အချို့က သူတို့ လက်ထဲ မှာ ရှိနေတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကတ်တွေကို ဒီကနေ့ မနက်အစောပိုင်းက စလို့ ရန်ကုန် မြို့ ပန်းဆိုးတန်းနဲ့ ဆူးလေဘုရား လမ်းမပေါ်က ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းချခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူတွေက
ကျိတ် ကျိတ်တိုး ၀ယ်ယူတာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Ooredoo ဖုန်းကတ် ၀ယ်လိုတဲ့သူတွေကို မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ နဲ့ အတူရောင်းချပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြင်ပ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဆိုင်တွေ မှာ ၀ယ်ယူနိုင်တယ်လို့ ဆူးလေဘုရားလမ်းမ ပေါ်က မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဆိုင် ပိုင်ရှင် တစ်ဦး က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"လူတိုင်းတော့ဝယ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝယ်တဲ့အခါကျရင် မှတ်ပုံတင် မိတ္တူလိုမယ်။ နောက် ဓာတ်ပုံ မူရင်းလိုမယ်။ နောက် ဝယ်ပြီးရင် လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ်။ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူအောက်မှာ လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ်။ အဲ့တာလေးတွေပေါ့။ ဈေးကတော့ တခုပဲ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ပိုလို့လဲ မရဘူး။ လျော့ယူလို့လဲ မရဘူး။ ၁၅၀၀ကျပ်ပဲ ရောင်းလို့ရမယ်။"
တကယ်တော့ Ooredoo မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကတ်တွေကို သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ တရားဝင်ရောင်းချခွင့် ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း Ooredoo မြန်မာ ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး မန်နေဂျာဒေါ်သီရိကြာညိုကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာတော့ ဆင်းကတ် လက်ဝယ်ရထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဈေးကွက် လက်ဦး မှု ရယူပြီး ဈေးကွက်အတွင်း စတင်ရောင်းချခဲ့တာကြောင့် မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းကတ်တွေ ရဲ့ ဈေးဟာ ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ ထိ အပြင်မှာ ပေါက်ဈေး ရှိလာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ Ooredoo ဖုန်းကတ် သွားရောက်ဝယ်ခဲ့တဲ့ ကို မင်းညိုအံ့က ဗွီအိုအေ ကိုပြောပါတယ်။
"တချို့ဆိုင်တွေက တစ်သောင်းအထိပေါက်တယ်။ ဆယ်ကဒ်ဝယ်ပြီးတဲ့သူတွေက အပြင်မှာ ပြန်ရောင်းတာက ခုနှစ်ထောင်၊ တစ်သောင်းလောက် အထိ ပြန်ရောင်းတယ် ခင်ဗျ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ဆိုင်တွေက ဘယ်လိုရောင်း သလဲဆိုတာ၊ တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင် မတူဘူး။ ဒီတစ်ဆိုင်ရောင်း ရပြီဆိုရင် နောက်တစ်ဆိုင်က မရှိတော့ဘူး။ အဲ့လို ပေးတဲ့ပုံစံခြင်း မတူဘူးခင်ဗျ။ ရောင်းလို့ရပြီဆိုလို့ ရောင်းတာတဲ့။ အဲ့လိုပြောတယ် ရောင်းလို့ရပြီ ပြောလည်း ပြောပြီးရော၊ မြန်မာပြည်ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရ လျှင်သူစားစတမ်းဆိုတော့ ဈေးတင်ရောင်းတယ်တဲ့။ တစ်ထောင့်ငါးရာကနေ အဲ့လိုပြောတယ်ခင်ဗျ။ ဆိုင်ရှင်တချို့က။"
Ooredoo ဆင်းကတ်တွေ ဝယ်ယူ မသုံးစွဲရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေကို မြို့ကြီးတွေမှာ တောက်လျောက်လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိနေသလို လာမယ့် ၈ လပိုင်းမှာလည်း ထပ်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်မှုတွေ အရှိန်မြင့်မယ်လို့ အော်ရီဒူး ဆင်းကတ် မသုံးစွဲ ဦးဆောင် ဆော်သြသူဖြစ်တဲ့ မကွေးဆရာတော်ကြီး ဦးပါမောက္ခ က မိန့်ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ အခုလို Ooredoo ဆင်းကတ်တွေကို ပြည်သူအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ၀ယ်ယူ သုံးစွဲနေတဲ့ အပေါ်မှာတော့ မကွေးဆရာတော်ကြီး ဦးပါမောက္ခ က အခုလို ဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်။
" Ooredoo နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့ နိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ၈လပိုင်း၊ ၁၀ရက်နေ့ ကနေ နောက်ပိုင်းမှာ ဘုန်းကြီးတို့ မြို့နယ်တွေ၊ မြို့နယ်တွေမှာ ကမ်းလှမ်းတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ Ooredoo ဖုန်း မဝယ်ယူ၊ မသုံးစွဲဖို့ Ooredoo ဖုန်း နံပတ်နဲ့ဖုန်းလာရင် ဖုန်းမကိုင်ဆောင်ဖို့လို့ Ooredoo ဖုန်းဆိုင်မှာ ဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်မလုပ်ဖို့လို့ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
Ooredoo ဖုန်းကို တချို့က ဝယ်ယူပြီးတော့ သုံးစွဲကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ မျိုးချစ်စိတ်၊ ဘာသာချစ်စိတ်၊ သာသနာချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလျင် ဝယ်ယူ ကြတာပါ။ အမှန်တကယ်တော့ မျိုးချစ်စိတ် ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက Ooredoo ကို ဝယ်ယူမသုံးစွဲကြပါဘူး။"
Ooredoo အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ သူတို့နဲ့ ဆင်းဒ်ကတ် ရောင်းချခွင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အရ ဆင်းကတ်တွေကို ခွဲတမ်းနဲ့ ချထားပေးတာ ဖြစ်ပြီးတော့ ရွှေအဆင့်မှ ဆင်းကတ် ၈၀၀၊ ငွေအဆင့်မှာ ဆင်းကတ် ၄၀၀ နဲ့ ကြေးအဆင့်မှာ ဆင်းကတ် ၂၀၀ အထိသာရောင်း ချထားပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့
Ooredoo ကုမ္ပဏီက လတ်တလောသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားတွေကတော့ ၎င်းတို့ ဆင်းကတ် အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုရင် တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အခြားအော်ပရေတာ (MPT, Telenor, Mectel)တွေကို ဖုန်း ခေါ်ရင် တစ်မိနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ် ၊ SMS စာတို ပေးပို့ပါက တစ်စောင်ကို၂၅ ကျပ်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြု မည်ဆိုပါက 1MB လျှင် ၂၅ ကျပ် ပေးရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းကတော Ooredoo ကုမ္ပဏီဟာ မွတ်စလင် တွေ အများစုနေထိုင်တဲ့ ကာတာနိုင်ငံ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာတွေ အနေနဲ့ ၀ယ်ယူ မသုံးစွဲကြဖို့၊ အကယ်လို့ Ooredoo နံပတ် နဲ့ ဖုန်းတွေ ဝင်လာရင်လည်း မကိုင်ကြဖို့ ၀ါဒဖြန့်ချိမှုတွေ ရှိထားတာပါတယ်။
Ooredoo နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အော်ပရေတာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရထားတဲ့ နောက်ထပ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ကတော့ နော်ဝေ အခြေစိုက် တယ်လီနော် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက လူအများစု ကိုင်တွယ်နေတဲ့ မြန်မာဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကလည်း လက်ရှိ ဖုန်းတွေကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ နောက်ထပ်မိုဘိုင်းဆင်းကတ်တွေကို နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီတွေ နဲ့ အပြိုင်ရောင်းချနိုင်ဖို့ ဂျပန် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ KDDI နဲ့ ပူးတွဲပြီး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်း တရားဝင်ကြေညာထားတာ ပါ။
အောင်ရဲ မောင်မောင် / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
လိုဏ်ခေါင်းတွေ ဖျက်ဆီးဖို့ အစ္စရေး သန္နိဋ္ဌဌာန်ချထား
အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်း အပစ်ရပ်ဖို့ သဘောတူသည် ဖြစ်စေ၊ မတူသည် ဖြစ်စေ၊ ဂါဇာ ကနေ အစ္စရေး ဘက်ကို ဝင်ရောက်ရာမှာ သုံးတဲ့ ပါလက်စတိုင်း စစ်သွေးကြွတွေ ဆောက်ထားတဲ့ ဥမင် လိုဏ်ခေါင်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ အစ္စရေး အနေနဲ့ သန္နိဋ္ဌဌာန် ချထားကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟုက ပြောပါတယ်။
အားလုံးကို ရှင်းလင်း ဖျက်ဆီးဖို့ နောက်ထပ် ရက် အနည်းငယ်ပဲ လိုတော့တယ်လို့ အစ္စရေး စစ်တပ် ဦးစီးချုပ်က ပြောထားခဲ့ပြီး၊ အဲဒီလို ရှင်းလင်းရေး တာဝန်တွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ခွင့် မပြုတဲ့ ဘယ်လို သဘောတူညီချက်ကိုမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး လို့လည်း အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။
အစ္စရေးက ဂါဇာကို လေကြာင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ဆက်လက် ပစ်ခတ်နေသလို ဟားမားစ်တို့ကလည်း အစ္စရေး ဘက်ကို ရော့ကက် ဒုံးကျည်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်နေပါတယ်။
အခုဆို တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတင်ခဲ့တာ သီတင်း ၄ ပတ်ထဲ ဝင်လာနေပါပြီ။ သေဆုံးသူ အရေအတွက်လည်း ပိုများလာတဲ့ အတွက် အစ္စရေးတို့ရဲ့ စစ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပေါ် နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်တာတွေလည်း ပိုတိုးလာနေပါတယ်။
လိုဏ်ခေါင်းတခုကို ဝင်ရောက် ရှင်းလင်းစဉ်
ရာထူးက အနားပေး ခံရတဲ့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင်တို့ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ တတိယအဆင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် နှုတ်ထွက်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် အဆိုပြု ခံထားရသူ သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီးနှစ်ဦး ရာထူးကနေ ရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်သွား ခဲ့တဲ့အပေါ် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောလာဟလတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းစဉ်မှာ ဦးရဲထွဋ်က အခုလို ဖြေကြား ခဲ့တာပါ။
"ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင် တို့ထွက်တာက တချို့ပြောနေသလို အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး၊ အဓိကက သူတို့နှစ်ဦးကိုယ်တိုင်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းရဲ့ တတိယအဆင့်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ၊ လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ ရလာဒ်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် အခက်အခဲရှိတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ သူတို့ဆန္ဒအလျောက် နှုတ်ထွက်ခွင့် ပေးဖို့ ဆိုပြီးတော့ သမ္မတကြီးကို တင်ပြတာ"
အခုလစ်လပ်နေတဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာအတွက် ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာအတွက် ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းအောင် ကိုခန့်အပ်ဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထံ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့က သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ အဆိုပြုထားပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပေးသည့် ကြိုတင်ငွေ ၄ သိန်း အန်အယ်လ်ဒီအမတ်များ မထုတ်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရပ်နားချိန် နယ်မြေဆင်း အလုပ်လုပ်ရင်သုံးဖို့ အမတ်တဦးကို ကြိုတင်ငွေ ၄ သိန်း ထုတ်ပေးတဲ့ အပေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်ဒီပါတီ) အမတ်တွေ အားလုံးက မထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာမှာ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ရပ်နားချိန် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အသီးသီးသို့ လွှတ်တော်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့် ပြုခြင်း ဆိုပြီး အမတ်တဦး ငွေ ၄ သိန်းထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အမတ် ဦးမင်းသူက ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာ မရှိသေးလို့ အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကြိုတင်ငွေ မထုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
“လွှတ်တော်ရဲ့ ရန်ပုံငွေကို ပေးသော်ငြားလည်း ဒီရဲ့ငွေတွေအပေါ်မှာ စာရင်းစစ်ရဲ့ စာရင်းစစ်ခြင်း ခံရမယ်။ မသုံးတဲ့ငွေတွေကို ပြန်ပေးအပ်ရမယ်။ ဒါမျိုး စည်းကမ်းချက်တွေ ညွှန်ကြားချက်တွေ ပါပါပတယ်။ လောလောဆယ် ဒီလို ပေးတဲ့ဟာက ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အဖွဲ့ချုပ်က လက်ခံခြင်း မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ဥပဒေအတည်ပြုပြီးမှသာ တစုံတရာအနေအထား အဖြစ် လက်ခံမယ်။ အခုဟာက ယူလိုက ယူနိုင်တယ်၊ မယူလိုက မယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးတွေလည်း ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွဲလို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တော်တော်များတော့ ထုတ်ယူသွားပါတယ်။”
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကထုတ်တဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာမှာတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ချီးမြှင့်ငွေနဲ့ စရိတ်များဆိုင်ရာ ဥပဒေအခန်း (၃)၊ ပုဒ်မ (၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀) ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီ ကြိုတင်ငွေ ၄သိန်း ထုတ်ယူခွင့်ပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သီပေါအမတ် ဦးရဲထွန်းက ဥပဒေမရှိသေးပေမယ့် နယ်မြေဆင်းတဲ့အခါ သုံးဖို့လိုလို့ ကြိုတင်ငွေထုတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဥပဒေတော့ မရှိသေးဘူး။ မနေ့ကတည်းက ဒါတွေကို သုံးဖို့အတွက် အသုံးစရိတ်ဘယ်လို တင်ရမယ်ဆိုတာတော့ ထုတ်ပြန်ထားတာတော့ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့က ဒေသမှာ လွှတ်တော်ကိစ္စတွေကို စာရင်းအင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို စစ်ဆေးတာ၊ ပြန်ကြည့်တာ ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တော် အတွေ့အကြုံတွေကို ရှင်းလင်းတဲ့အခါ အသုံးလိုတယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့တွေ ထုတ်ကြပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကတော့ မထုတ်ဘူးလို့တော့ ကြားတယ်။”
အခုလို လွှတ်တော်အမတ်တွေ နယ်မြေဆင်းရင်သုံးဖို့ ကြိုတင်ငွေထုတ်ပေးတာ လွှတ်တော်သက်တမ်း ၃ နှစ်ကျော်အတွင်း ဒါ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပဲ ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဘက်ကအမတ်တွေကို အလားတူကြိုတင်ငွေ ထုတ်ပေးတာမျိုး မကြားသိရသေးပေ။
အိန္ဒိယ မြေပြိုမှု ၂၃ ဦးသေ၊ ၁၅၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးဆဲ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ကျေးရွာတစ်ရွာ မြေပြိုကျမှုမှာ ခုချိန်အထိ သေဆုံးသူ ၂၃ ယောက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေး သမားတွေက အသက်ရှင်နေသူတွေကို ညလုံးပေါက် ဆက်လက် ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိုးက ဆက်တိုက် ရွာနေတဲ့အတွက် အသက်ရှင်နေနိုင်သူတွေကို ဆက်လက် ရှာဖွေရာမှာ အဟန့်အတား ဖြစ်နေပါတယ်။
ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူ ၈ ယောက်ကိုတော့ သူတို့ ရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးကုသပေးနေပါတယ်။
မုတ်သုံမိုး သည်းထန်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တောင်ပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက် Pune ခရိုင်အတွင်းက Malin ရွာ နစ်မြုပ်သွားခဲ့တာပါ။
ဘယ်လောက်ထိ ပျက်စီးတယ် ဆိုတာ သိရအောင် အိန္ဒိယ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Rajnath Singh က အဲဒီနေရာကို ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပျောက်နေဆဲ လူပေါင်း ၁၅၀ လောက် ရှိနေပြီး သူတို့ဟာ ရွံ့နွံတွေ ဒါမှမဟုတ် အပျက်အစီးတွေအောက်မှာ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အဲဒီဒေသမှာ သစ်ခုတ်လှဲမှု အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေခဲ့လို့ မြေပြိုကျတဲ့ အန္တရာယ် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ ၈ ဦးကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့
ရွှေတူးဖော်စဉ် မြေပြိုကျ၍ ၂ ဦးသေ၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၃၁
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရေမျက်ကျေးရွာတောင်ဘက်(၃)မိုင်ခန့်ရှိ မင်းပန်းတောင်ပေါ်၌ ၎င်းကျေးရွာနေ အောင်နိုင်ဝင်း(၃၅)နှစ်ပိုင်သည့် ရွှေအင်းဟောင်းအတွင်း ၎င်းနှင့်အတူ ရေရှင်ကျေးရွာနေသူများဖြစ်သည့် လှလင်း(၂၄)နှစ်၊ ထွန်းလင်း(၄၃)နှစ်၊ ဇော်ဇော်(၂၀)နှစ်တို့(၄)ဦးသည် ရွှေတူးဖော်စဉ်အနက် (၆၀)ပေခန့်အရောက်မြေပြိုကျ၍ ပိတ်မိနေကြောင်း သတင်းအရ သပိတ်ကျင်းမြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အဆိုပါနေရာသို့သွားရောက်ကာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများနှင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီတူးဖော်ခဲ့သည်။
ထိုသို့တူးဖော်ရာ အောင်နိုင်ဝင်းနှင့် လှလင်းတို့၌ ဒဏ်ရာများရရှိသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ထွန်းလင်းနှင့် ဇော်ဇော်တို့အား အသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်တူးဖော်ရရှိခဲ့သဖြင့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စဉ့်ကူးမြို့မရဲစခန်း သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ်(၅/၂၀၁၄)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်။ ဓါတ်ပုံ - အင်တာနက်
မိုင်းဆတ်ခရိုင်တွင် မူးယစ်ဆေးထုတ် ကုန်ကြမ်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခရိုင်ထဲမှာ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ ဖမ်းမိပါတယ်။
မိုင်းဆတ်မြို့နယ် မိုင်းတွမ်းကျေး ရွာအုပ်စု မအို့ကျေးရွာမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ သိုလှောင်ထားကြောင်း ကြိုတင်သတင်းရထား ချက်အရ ခရိုင်မူးယစ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ နယ်မြေခံတပ်ဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့ မနက်က သွားရောက်ဖမ်း ဆီးခဲ့တာလို့ တာချီလိတ်မူးယစ်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲအုပ် အောင်ကျော်စိုးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
စစ်ဆေးချက်အရ သောက်ရေသန့် စက်ရုံ ဂိုဒေါင်ထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အီသိုင်းအီသာဆေးရည် ဂါလန်ပေါင်း (၉၀၅၅) ဂါလန်၊ လီတာနှုန်းဖြင့် (၄၁၁၆၄.၀၃) လီတာ၊ ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်းပေါင်း (၄၅၂၈.၀၄) သိန်းကို ရှာဖွေ သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ အဓိက တာဝန်ရှိတဲ့ သောက်ရေသန့်စက်ရုံ ပိုင်ရှင် ဦးစုမ်မွန်း (ခ) စိုင်းစွန်ဝင်းက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အတွက် တရားခံပြေးအဖြစ် မိုင်းတွမ်းနယ်မြေရဲစခန်းကနေ မယ(ပ)၂/၂၀၁၄၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ခ)အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မှုခင်းဆေးသိပ္ပံအဖွဲ့ လေယာဉ်ပျက် နေရာကို ရောက်ရှိ
နယ်သာလန်နဲ့ သြစတြေးလျ နိုင်ငံတို့က မှုခင်း ဆေးပညာရှင်တွေ အဖွဲ့ဟာ မလေးရှား လေယာဉ် MH17 ပျက်ကျခဲ့တဲ့ နေရာကို တစ်ပတ် အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် သွားရောက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ OSCE ခေါ် ဥရောပ စီးပွားရေးနဲ့ လုံခြုံရေးရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ယူကရိန်း အရှေ့ပိုင်းက သူပုန်တွေ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လေယာဉ် ပျက်ကျရာ နေရာမှာ နိုင်ငံတကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ကို လုံခြုံရေး ချထားဖို့ ယူကရိန်း ပါလီမန်က တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံခဲ့ပြီးနောက် အခုလို ဖြစ်လာတာပါ။
မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် Najib Razak ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က ပျက်ကျခဲ့တဲ့ မလေးရှား လေယာဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ နယ်သာလန် ဝန်ကြီးချုပ် Mark Rutte နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ် လိုက်ပါသွားသူ ၂၉၈ ယောက်စလုံး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အထဲမှာ အများစုက နယ်သာလန် နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သေဆုံးသူတွေရဲ့ ရုပ်ကြွင်းတွေကို အမြန်ဆုံး ပြန်ရဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ Razak က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လေယာဉ်ပျက်ကျရာ နေရာကို နိုင်ငံတကာက စုံစမ်း စစ်ဆေးသူတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားနိုင်ဖို့ ယူကရိန်း စစ်တပ်နဲ့ ရရှား လိုလားသူ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်တွေကြား အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်နေတာတွေကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ဖို့လည်း သူက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ယူကရိန်း အစိုးရတပ် အစောင့်အရှောက်နဲ့ ထွက်ခွာစဉ်
ဆီယာရာ လီယွန်း Sierra Leone နိုင်ငံမှာ အသက်သေစေ နိုင်တဲ့ အီဘိုလာ Ebola ဗိုင်းရပ် စ် ပျံ့နှံ့နေမှု အန္တရာယ်ကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ရောဂါ စတင် ဖြစ်ပွားရာ အဓိက နေရာတွေ အားလုံးကို ဘယ်သူမှ မဝင်ထွက်ရအောင် တားမြစ်မယ်လို့ သမ္မတ Ernest Bai Koroma က ပြောပါတယ်။
လိုင်ဘေးရီးယား နိုင်ငံမှာလည်း တင်းကျပ်တဲ့ အရေးပေါ် အစီအစဉ်တွေ ချမှတ် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံမှာတော့ အနောက် အာဖရိက ကနေ သူ့နိုင်ငံထဲ ဝင်ရောက်လာသူ အားလုံးကို ရောဂါ စစ်ဆေးမှုတွေ စတင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အိမ်နီးချင်း ကင်ညာ နိုင်ငံမှာလည်း နယ်စပ်ဂိတ်တွေ အားလုံးမှာ ခရီးသွားတွေကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေ အစိုးရက တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အနောက်အာဖရိက ဒေသမှာ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၇၀ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အီဘိုလာကြောင့် အနောက် အာဖရိကမှာ သေဆုံးသူ ၆၇၀ ကျော်ပြီ
တာချီလိတ် ဇူလိုင် ၃ဝ
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တာချီလိတ်မြို့နယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး မယ်ယန်းပူးပေါင်းဂိတ် Mobile Team အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဝင်းခိုင် ဦးစီးသည့်စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုတားဆီးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ သတင်းမီဒီယာများပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ဇူလိုင် ၂၅ ရက် ည ၁ဝ နာရီက တောင်ကြီးမှ တာချီလိတ်သို့ သံလွင်လိုင်းပြေးဆွဲသည့် ၄၈/----Hiace အဖြူရောင်ယာဉ်ကိုစစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင်တင်ဆောင်လာသော ကျောက်စိမ်းဟုယူဆရသည့် ကျောက်တုံး ရှစ်တုံး၊ အလေးချိန် ၂၄ ဒသမ ၈ ကီလို၊ ဆင်ရုပ် ၈၃ ရုပ်၊ အလေးချိန် ၂၁ ဒသမ ၅ ကီလို၊ လက်ကောက် ၆ဝ၃ ကွင်း၊ အလေးချိန် ၃ ကီလို၊ ကျောက်ပုတီး လုံး ၂၇ဝ၊ အလေးချိန် ၁၅ ကီလို၊ ဆည်းလည်းကျောက်ပြားခေါင်းလောင်း ၁၄ ကီလို၊ ကျောက်ဖြတ်စ ၂ ဒသမ ၁ ကီလို၊ ကျောက်လက်ပတ် ၄ဝ ဒသမ ၅ ကီလို၊ ပုတီး ကုံး ၁၂ဝ၊ အလေးချိန် ၁ဝ ဒသမ ၅ ကီလို စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၃၁၅၃၅ဝဝ ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသဖြင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင် နန်းစမ်နွမ်ဟွမ်ကိုမေးရာ သံလွင်ယာဉ်လိုင်းတွင် အသင်းဝင်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး သံလွင်ဂိတ်မှူးမှ တင်ဆောင်ပေးရန် သယ်ဆောင်ခ ၅ဝဝဝဝ ဖြင့်သယ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပိုင်ရှင်မှာ ဒေါ်ဂျမ်းစိန်ဖြစ်ပြီး မန္တလေးမှတာချီလိတ်သို့ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး သက်သေခံ ပစ္စည်းများအား မယ်ယန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ် လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးအောင်ဝင်းခိုင်က အဆိုပါပစ္စည်းများအား ဇူလိုင် ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်း က အကောက်ခွန်ဌာနသို့ အပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းသယ်ဆောင်လာသူ ကျောက်စိမ်းပိုင်ရှင်အား ဥပဒေအရအရေးယူပေးရန် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးက တရားလို ပြုလုပ်တိုင်တန်းရာ ဒေါ်ဂျမ်းစိန်အား တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့် အရေးယူပြီး သက်သေခံပစ္စည်းများကို ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး ဟုတ် မဟုတ်နှင့် တန်ဖိုးငွေတွက်ချက်စစ်ဆေးထင်မြင်ချက်တောင်းခံနိုင်ရန် ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း သတ္တု တွင်းဝန်ကြီးဌာန နေပြည်တော်သို့ ပေးပို့ထင်မြင်ချက်တောင်းခံထားကြောင်း သိရသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် (တရုတ်နယ်စပ်) နောင်မတာရွာအနီး အစိုးရ တပ်မတော် အရာရှိ သတ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာအကြီးအကဲ များနှင့် ဘာသာပြန်များအား ဆက်တိုက် ရိုက်နှက်စစ်ဆေး မှုကြောင့် ဒေသခံ ၄၀၀ ကျော် (ရွာလုံးကျွတ်) တရုတ်နယ်သို့ တိမ်းရှောင်လိုက်ရ သည်ဟု သိရပါသည်။
ဓါတ်ပုံ- ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခံရမှုကိုထိပ်လန့်သည့် နောင်မတာရွာသားများ အဝတ်အစားယူ၍ထွက်ပြေးစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တရန်းခရိုင်မှာ ဘတ်ငွေအတုတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ငွေစက္ကူတွေ သတိထားသုံးစွဲဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံတော်ဘဏ်က ပြည်သူတွေကို သတိပေးထားပါတယ်။
ဘဏ်လည်ပတ်မှုငွေထဲမှာလည်း9– A 3828862 နဲ့9– A 3828863 နံပါတ်ပါ ဘတ်ငွေ ၁ ထောင်တန် ၂ ရွက် ၀င်ရောက်လာတာ တွေ့ရှိရပြီး အဲဒီငွေစက္ကူ ၂ ရွက်ဟာ အစစ်နဲ့ အလွယ်တကူ ခွဲခြား သိမြင်နိုင်ကြောင်း၊ အဓိကအချက်မှာ ထိုင်းဘုရင်ပုံမှာ ရေစာ မပါရှိဘဲ ရောင်စုံပုံနှိပ်စက်နဲ့ ထုတ်ထားကြောင်း ဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ အပြောကို ကိုးကားပြီး ထိုင်းရုပ်သံသတင်းဌာန ချန်နယ် ၇ မှာ ဖော်ပြသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အိဆန်ဒေသ နယ်စပ်ဈေးထဲမှာလည်း ဘတ် ၁၀၀ တန်နဲ့ ၅၀၀ တန် ငွေစက္ကူ အချို့ တွေ့ရှိရကြောင်း သတင်းရရှိတဲ့အတွက် ထွက်ရှိရာနေရာကို စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ ဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
ငွေစက္ကူ အတုနဲ့ အစစ် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ဖို့ နည်း ( ၃ ) နည်းမှာ – ငွေစက္ကူအစစ်ဆိုရင် ငွေစက္ကူသားမှာ ကျစ်လျစ်ခိုင်မာခြင်း၊ အလွယ်တကူ ခေါက်ခြင်း ဆွဲဆန့်ခြင်းကို ခံနိုင်ခြင်း၊ ဘတ်ငွေတန်ဖိုးနဲ့ ထိုင်းအစိုးရလို့ ဖော်ပြထားတဲ့စာလုံးမှာ အနည်းငယ် ဖောင်းကြွနေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေစက္ကူ ဘယ်ဘက်ထောင့်ကို စောင်းကြည့်လိုက်ရင်သော်လည်းကောင်း၊ လက်နဲ့ စမ်းသပ် ကြည့်လိုက်ရင်သော် လည်းကောင်း ရေစာနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ ငွေသားတန်ဖိုးကို တွေ့ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ညအချိန် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ ငွေစက္ကူ စစ်ဆေးတဲ့စက်ပါ ဆောင်ထား သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ငွေစက္ကူအတု ဒါမှမဟုတ် အတုလို့ သံသယရှိတဲ့ ငွေကို လက်ခံရရှိသူတွေအနေနဲ့ သုံးစွဲခြင်း မပြုဘဲ ရဲကို အကြောင်းကြားဖို့၊ ငွေစက္ကူအတုတွေ ဖမ်းဆီးရမိအောင် အကြောင်းကြား နိုင်သူကို ဆုငွေချီးမြှင့်မယ်လို့လည်း ဘဏ်ဝန်ထမ်းကပြောကြောင်း သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ထိုင်းရတ်သတင်းမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့ညက တရန်းခရိုင် တရန်းမြို့ ဖတ်ထလုန်းလမ်းမပေါ်က အဖျော်ယမကာဆိုင်တခုမှာ ဘတ် ၁၀၀၀ တန်ငွေအတုနဲ့ ဈေးလာဝယ်တာ ခံလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းဥပဒေအရ ငွေစက္ကူအတုမှန်းသိလျက်နဲ့ သုံးစွဲနေရင် ငွေအနည်းအများကိုလိုက်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်သော်လည်းကောင်း၊ ငွေဒဏ် ဘတ် ၂ ထောင်မှ ၃ သောင်းထိ ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လိုင်စင်ရထားတဲ့ ကာတာ အခြေစိုက် အော်ရီဒူးကုမ္ပဏီက ဆင်းကတ်တွေကုို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနေ့ ၅၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ကြိုတင်ရောင်းချနေပါတယ်။
ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့က မန္တလေးနဲ့ နေပြည်တော်မှာ ဆင်းကတ်တခု ကျပ် ၁၅၀၀ စတင်ရောင်းချပေးခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရောင်းချနေတာပါ။
အော်ရီဒူး ဖုန်းအချင်းချင်း မိနစ် ၉၀၀ နဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျအစောင် ၉၀၀၊ အခြားဖုန်းတွေကို မိနစ် ၉၀၊ မက်ဆေ့ခ်ျအစောင် ၉၀ အခမဲ့ ပြောနိုင်မှာဖြစ်သလို အင်တာနက်ဖုန်းနဲ့ 20 MB ပမာဏ အခမဲ့ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှက နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေ မှာ ဌက်ဖျားရောဂါကုသဆေး မတိုးတော့တဲ့လူနာတွေ အများအပြားတွေ့နေရပြီလို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး ထိပ်တန်းပညာရှင်တွေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနေ့က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
New England ဆေးပညာဂျာနယ်မှာ ဖေါ်ပြချက်အရဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား မြောက်ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်းတို့အပြင် ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေက ဌက်ဖျားရောဂါပိုးရှိသူ ၁၂ဝဝ ကျော်ရဲ့သွေးတွေကို စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ဌက်ဖျား တိုက်ဖျက်ဆေးတွေကို ယဉ်ပါးနေတာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာလည်း အဲ့ဒီလို ဌက်ဖျားဆေးမတိုးတော့တဲ့လူနာတွေ တိုးပွားလာနေ တယ်လို့ ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ အခုလို အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဌက်ဖျားတိုက်ဖျက်ဆေး ယဉ်ပါးမှုတနေ့တခြား ပွားများလာနေတာကို အလေးအနက်ထားပြီး ဖြေရှင်းရမယ့် အချိန်ရောက်နေပြီလို့လည်း အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ပညာရှင် Nicholas White က သတိပေး လိုက်ပါတယ်။
ဆီးရီးယား နိုင်ငံထဲကို၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်ထားတဲ့၊ ထောက်ပံ့ရေး ယာဉ်တွေ၊ အခု လာမယ့် ရက် အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ၊ ထပ်မံစေလွှတ်သွားဖို့ ရှိတယ် ဆိုပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူသားချင်း စာနာနားလည်း ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးအကဲ၊ ဗယ်လရီ အားမို့စ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို စေလွှတ်တဲ့ အခါမှာတော့ ယိုယွင်းလာတဲ့ အခြေအနေတွေ ကြောင့်၊ အီရတ် နိုင်ငံဘက်ခြမ်း ကနေတော့၊ စေလွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးတော့ လည်း ပြောပါတယ်။
ဆီးရီးယား အစိုးရရဲ့ သဘောတူမှု ကို ကြိုတင် တောင်းခံစရာ မလိုပဲ၊ ဆီးရီးယား နယ်မြေထဲ၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ယာဉ်တန်းတွေ စေလွှတ်ဖို့၊ ဒီလ အစောပိုင်း က ပဲ၊ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ဆုံးဖြတ် ထားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး အစိုးရ အနေနဲ့ အခုအချိန်ထိအောင်၊ လုံခြုံရေး ကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုက်နာပဲ၊ အရပ်သားတွေပေါ်၊ ပေါက်ကွဲအားပြင်းထန်ပြီး၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက်သေစေနိုင်တဲ့ စည်ပိုင်းဗုံးတွေ၊ ကြဲချနေတုန်းပဲလို့၊ အမေရိကန် အခြေစိုက်၊ Human Rights Watch က၊ ပြောထားပါတယ်။
ကုလ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ရလာတဲ့ ဆီးရီးယား ပြည်သူတွေ
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ် ချိုးကွေ့ လာတယ် ဆိုပေမဲ့ အောင်မြင်မှုရဖို့ အခက်အခဲတွေ တော်တော်များများ ရင်ဆိုင်ရ ဦးမယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပြောလိုက်ပါတယ်။ အခုလာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် စမ်းသပ်ခံ ကာလဖြစ်ပြီး ဒီအခြေအနေကို တကမ္ဘာလုံး စောင့်ကြည့်နေသလို၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုတွေ အောင်မြင်မှုရဖို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဆက်ပြီး အားပေး ကူညီသွားမယ်လို့ အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Daniel Russel က ပြောလိုက်တာပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
လာမယ့် သြဂုတ်လထဲ ARF ခေါ်တဲ့ အာဆီယံ ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry တက်ရောက်ဖို့ရှိတာကြောင့် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Russel က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့ မူဝါဒတွေ၊ ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kerry ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာရှိတဲ့ Commonwealth Club မှာ ဇူလှိုင် ၂၈ ရက်နေ့တုန်းက ရှင်းလင်းပြောခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာပဲ ဒေသတွင်း သမိုင်းဝင်လောက်အောင် ထူးခြားချက်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ် ချိုးကွေ့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်။ ဒီလို အချိုးအကွေ့ပေါ် ရောက်လာပေမဲ့လည်း အခက်အခဲတွေ အကဲစမ်းချက်တွေ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေတော့ ရှိနေတယ်လို့ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Russel က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့လည်း ဒီအချိုးအကွေ့ဟာ သေချာ ပြီးပြည့်စုံသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အကဲစမ်းချက် အတော်များများ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်း အောင်မြင်မှု ရသွားပြီလို့ နိဂုံးချုပ်လို့ မရသေးပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာ နှစ်အကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စ၊ အစိုးရထဲ စစ်ဘက်နဲ့ အရပ်သား ပါဝင်ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စ၊ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ သမ္မတနေရာ ထမ်းဆောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် ကိစ္စတွေနဲ့ လုံးပမ်းနေရပါတယ်။”
အခက်အခဲတွေထဲမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အခြေခံတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အဆုံးသတ်အောင် ဘယ်လို ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်မလဲ ဆိုတာ မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေအတွက် ခက်ခဲတဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်း လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Russel က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကျပ်အတည်း ကြုံနေရတာကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်ဖို့လည်း အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်းမှာ အပြုသဘောဆောင် တိုးတက်မှုအချို့ တွေ့လာရပါတယ်။ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့လို အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေကို ပြန်လက်ခံဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ အစိုးရက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် လပေါင်းများစွာ ဒုက္ခကြုံနေရသူတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရပ်တည်မှု၊ လုံခြုံဘေးကင်းမှုတွေ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ မဟာဗျူဟာချ လုပ်ဆောင်လာပါတယ်။”
ဒါကြောင့်လည်းပဲ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲ အခြေအနေတွေနဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်နေသလဲဆိုတာတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kerry က အခု သြဂုတ်လ မြန်မာနိုင်ငံသွားစဉ်မှာရော၊ သမ္မတ အိုဘားမား လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ မြန်မာနိုင်ငံ လာမယ့် ခရီးစဉ်မှာရော အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က စူးစမ်းသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“လာမယ့် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kerry မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်တဲ့အခါမှာ ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို အလေးပေး လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် နိုဝင်ဘာကျရင် သမ္မတ အိုဘားမားရော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kerry မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့အခါမှာလည်း လာမယ့်နှစ်လုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြင်ဆင်မှု အခြေအနေတွေကို စူးစမ်းသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီအစမ်းသပ်ခံ အချိန်ကာလကို တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည်နေမှာဖြစ်သလို၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ရော မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ပါ အတူ ရပ်တည်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို လေးစားအကာအကွယ်ပေးဖို့ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး တိုက်တွန်းသွားပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ဆက်ပြီး ကူညီထောက်ခံသွားပါမယ်။”
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kerry အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့် သြဂုတ်လဆန်း ကျင်းပမယ့် ARF အာဆီယံ ဒေသတွင်းဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ရှိပြီး၊ အဲဒီကာလအတွင်းမှာ ဒေသတွင်း အခြားအရေးပါမှုတွေဖြစ်တဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကိစ္စ အမေရိကန်နဲ့ အာဆီယံဒေသ ကုန်သွယ်ရေး ကိစ္စတွေကိုပါ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု သြဂုတ်လကျင်းပမယ့် အစည်းအဝေးမှာ ဒေသတွင်းအရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးဖြစ်ပြီး၊ ဒီအစည်းအဝေးကနေ ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kerry အနေနဲ့ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း မစ္စတာ Russel က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ကျင်းပမယ့် အရှေ့အာရှထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲအတွက်လည်း ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာ အစီအစဉ်တွေ ကြိုတင် ဆွေးနွေးပြင်ဆင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အရှေ့အာရှ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ သမ္မတ အိုဘားမား ကိုယ်တိုင်လည်း တက်ရောက်ဖို့ ရှိတာမို့၊ ဒီခရီးစဉ်ဟာ သမ္မတ အိုဘားမားအတွက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယမြောက် လာရောက်မယ့် ခရီးစဉ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ​အနောက်ပိုင်းမှာ ​မြေပြိုမှုတွေ ​ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ​လူ ​၁၉ ​ဦးလောက် ​သေဆုံးပြီး ​အယောက် ​၁၅၀ ​ကျော် ​ပိတ်မိနေဆဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ​ပိတ်မိသူတွေကို ​ကယ်ဆယ်ဖို့ ​အရေးပေါ် ​ကယ်ဆယ်ရေး ​သမားတွေ ​လုပ်ဆောင် ​နေကြပြီ ​ဖြစ်ပါတယ်။
Pune ​ပူးနာ ​ခရိုင် ​အတွင်းက ​ကျေးရွာ ​တရွာလုံး ​မြေအောက် ​ရောက်ရှိ ​သွားတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးရာသီ ​အတွင်း ​မိုးသည်းထန်စွာ ​ရွာသွန်း ​ပြီးနောက် ​တောင်ကုန်းပေါ်က ​မြေတွေ ​ပြိုကျပြီးနောက် ​တောင်အောက်က ​ရွာတရွာလုံးကို ​ဖုံးလွှမ်းသွားတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေပြိုမှု (Credit: AFP)